Manangona angona avy amin'ny loharanom-pahalalana isan-karazany amin'ny mpifaninana aminao i Rivaloks ary manao izay hahitan'ny data mora azo avy amin'ny foibe data mpifaninana tokana. Ny loharanom-pahalalana dia misy ny fifamoivoizana, ny fikarohana, ny tranokala, ny gazety, ny gazety, ny sosialy ary hatramin'ny olona ary ny fanovana asa. Rivalhio dia vahaolana SaaS izay mametraka ny faharanitan-tsaina amin'ny fifaninanana eo an-tananao. Mino izahay fa raha mianatra amin'ny mpifaninana aminao dia afaka mihombo haingana ianao, manalavitra ireo lesoka ary mahazo tombony. Miaraka amin'i Rivaloks, afaka manao orinasa isan-karazany